khilaafki Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha oo la dhameeyay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka khilaafki Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha oo la dhameeyay
khilaafki Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha oo la dhameeyay
Warar xaqiiqa ah oo website-ka xaqiiqa.com heshay ayaa waxa ay sheegayaan in khilaafki u dhaxeeyay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Raiisal Wasaare Cabdiwali Sheekh Maxamad lasoo gabagabeeyay.
Khilaafka oo aad u cuslaa ayaa waxa uu taagnaa maalmihi lasoo dhaafay, kadib markii Raiisal wasaaraha uu isku dayay in uu isku shaandheyn kusameeyo golaha wasiirada isaga oo damacsanaa in uu ceeriyo qaar ka mid ah wasiirada kuwaas uu kujiro wasiir Farax Cabdulkhaadir.
Halka dhinaca kale, madaxweyne Xasan sheekh Maxamuud uu doonayay in aan Farax Cabdulkhaadir laga qaadin xilkiisa iyo sidoo kale in dib loo sooceliyo Wasiirki hore ee Wasaarada ammniga Cabdikariim Guuleed, kaas oo xilkii iska casilay kadib weerarki lagu qaaday xarunta golaha Baarlamaanka ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa aad ugu adkeysanayay maalmihii lasoo dhaafay in wasaarad kale loo dhiibo mudane Cabdikariim Guuleed, iyada oo Raiisal wasaaruhuna ku gacan seeray arintaas.
Si kastaba ha ahaate, dhexdhexaadinta lagu dhameeyay khilaafka ayaa maalmahan waxaa waday Raiisal wasaarihi hore ee Soomaaliya Cali Maxamad Geedi iyo Nuurto Sheekh Maxamuud oo ah Haweenay la dhalatay Madaxweyne Xasan Sheekh.
Waxaa ay heshiis ku gaareen labada masuul in Wasiirki hore ee Wasaarada ammniga mudane Cabdikariim Guuleed aan lasoo celin, balsa lagu badalo nin ay qaraabo yihiin oo lagu magacaabo Geele Ruush kaas oo soo noqday madaxa Ciidamada qalabka sida ee Dowladdi sheekh Shariif axmed.
Sidoo kale, heshiiska ayaa waxaa ka mid ahaa in Farax Cabdulkhadir loo daayo xilka wasiirnimo oo aanan laga qaadin.
Kala soco marwalba arimaha xasaasiga ah ee siyaasada Soomaaliya websiteka xaqiiqa.com
Previous articleMAXAA KULMIYEY KADEEDKII DARISKA IYO KACDOONKII XILDHIBAANADA?
Next articleLabada Masuul ee ugu sareyso Soomaaliya oo Baarlamaanka wada tagay